Home > ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအကြား Exchange Letter လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံအစိုးရအကြား Exchange Letter လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်(၉)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရုံးအမှတ်(၃၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Chen Hai နှင့်တာ၀န်ရှိသူများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား၀န်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်း၀န် ဦးမြသန်းထိုက်၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များဖြစ်ကြသော ဦးကျော်ဆန်း၊ ဦးကျော်ဦးနှင့် တာ၀န်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mr. Chen Hai မှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခုလို တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အားကစား ဆိုင်ရာအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းနှင့် နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စီမံကိန်းသဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနား၌ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကိုယ်စား စာချုပ်၌လက်မှတ်ရေးထိုးခွင့်ရရှိ၍ အထူးဂုဏ်ယူ၀မ်းသာမိပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများထဲတွင် အားကစားဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုသည်လည်း အထူးအရေးပါကြောင်းနှင့် (၃၀)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အောင်မြင်မှုရရှိပြီး ဆုတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ အားကစားဆိုင်ရာနည်းပြများ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း၊ အားကစားဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းများ ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးများ ပါ၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အားကစားအောင်မြင်မှုများစွာရရှိကာ အားကစားဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုရရှိထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အားကစားပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့အားကစားနည်းများတိုးတက်လာပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာမည်ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ယခုအခါ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ ငြိမ်းချမ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံအတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ မြန်မာပြည်သူများ သာယာချမ်းမြေ့မှုများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံစီမံကိန်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိစေရန် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယ၀န်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးပူးပေါင်းစီစဉ်မှုအရ နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲပြီးအားကစားကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ (၂၇)ကြိမ်မြောက် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ နှစ်နိုင်ငံနည်းပညာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အရ အုပ်ချုပ်သူ(၂)ဦး၊ နည်းပြ(၂၆)ဦးတို့မှ လာရောက်သင်ကြား ပေးခြင်း၊ အားကစားနည်း(၁၁)နည်းမှ အားကစားသမား(၂၁၅)ဦးအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် ပူးတွဲလေ့ကျင့်စေခြင်းနှင့် အားကစားနည်း(၁၅)နည်းမှ အားကစား ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အောင်မြင်မှုအထိုက် အလျောက်ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊ (၂၈)ကြိမ်မြောက် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမအကြိမ် အဖြစ် အားကစားနည်း(၇)နည်းမှ အားကစားသမား (၁၀၂)ဦးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် အားကစားနည်း(၁၈)နည်းမှ အားကစားသမား(၂၉၁)ဦးတို့အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံတွင် ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ (၂၉)ကြိမ်မြောက် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲတွင် အားကစားနည်း (၁၅)နည်းမှ အားကစားသမား(၂၆၄)ဦးအား ကူမင်းမြို့နှင့် ချန်ဆားမြို့တို့တွင် ရက်ပေါင်း(၉၀)ကြာ ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ဟော်ကီ အားကစားသမား(၂၅)ဦးနှင့် မြန်မာမသန်စွမ်းအား ကစားသမား(၆၆)ဦးတို့ ပူးတွဲ လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အားကစားမှာ ဆုတံဆိပ်များ ရရှိခဲ့ပါကြောင်း၊
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံအနေနှင့် SEA GAMES ပြိုင်ပွဲများတွင်သာမက တရုတ်အားကစားနည်းပြ Youth Volunteers (၁၀)ဦးအား အားကစားနှင့်ကာယပညာ (သိပ္ပံ)ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မော်လမြိုင်နှင့် တောင်ကြီးတို့တွင် စေလွှတ်တာ၀န်ထမ်းဆောင် စေခဲ့ပါကြောင်း၊ နှစ်ရှည်စီမံကိန်းဖြင့် အားကစားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆက်လက်ကူညီ ပေးနေသလို နောင်လည်း ဆက်လက်ကူညီပေးမည်လို့ ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ယခု တရုတ်-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အစိုးရသဘောတူညီချက်အရ Rowing Boats? Rowing Paddles နှင့် Traditional Boats? Traditional Paddles များအား ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခြင်း၊ Exchange Letter လက်မှတ်ရေးထိုးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် တရုတ်အစိုးရမှ မြန်မာအားကစားသမား(၄၈၀)ဦးတို့အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတွင် ရက်ပေါင်း(၄၂၀) Joint Training လာရောက်ပြုလုပ် နိုင်ရေးအတွက် ကူညီပေးခြင်းနှင့် Gymnastics ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ တရုတ်နည်းပြ(၁၆)ဦးအား စေလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများ ပူးပေါင်းဖလှယ်ခြင်း၊ အားကစားသမားများထူးချွန်လာအောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ယခုလို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတော် အနေနှင့် ကျေးဇူးများစွာရှိပါကြောင်း၊ အားကစားပညာရပ်တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးစင်္ကြန်ဟာလည်း ကောင်းမွန်သောရလဒ်ကောင်းများ ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံအားကစားဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုစာချုပ်အား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Chen Hai ၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမျိုးလှိုင်တို့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး စာချုပ်များအပြန်အလှန် ဖလှယ်ကြပါသည်။
ထို့နောက် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Chen Hai အားအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးပြီးစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါကြောင်း သိရှိရပါသည်။
လတ်တလောအစီအစဉ်အရ (၃၀)ကြိမ်မြောက် SEA GAMES တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှ မြန်မာအားကစားသမား(၁၃၀)ဦးအား ရက်ပေါင်း(၃၀) လက်ခံလေ့ကျင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လှေလှော်အားကစားနည်းတွင် နဂါးလှေ(၈)စီး ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Source URL: http://spedmyanmar.com/content/%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%91%E1%80%B1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%85%E1%80%AF%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%99%E1%80%BC%E1%80%94%E1%80%BA%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%B7-%E1%80%90%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%90%E1%80%BA%E1%80%95%E1%80%BC%E1%80%8A%E1%80%BA%E1%80%9E%E1%80%B0%E1%80%B7%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%90%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6-%E1%80%94%E1%80%BE%E1%80%85%E1%80%BA%E1%80%94%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%BA%E1%80%84%E1%80%B6%E1%80%A1%E1%80%85%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B8%E1%80%9B%E1%80%A1%E1%80%80%E1%80%BC%E1%80%AC%E1%80%B8-exchange